macOS High Sierra haichabatanidzwe neako Apple ID | Ndinobva mac
Kubva musi weMuvhuro wekupedzisira masikati, vese vashandisi vane komputa inoenderana yeMac vanogona nakidzwa neiyo nyowani macOS Yakakwira Sierra desktop desktop system, kungave kuburikidza neyakareruka, kunyange isingakurumidze kuvandudza, kana nekuita a kuisirwa kubva pakutanga izvo zvinovatendera iwo ari nani uye zvakanyanya kushandisa.
MacOS High Sierra yasvika izere nenhau, mazhinji acho asiri kuoneka pakutanga kuona, sezvazviri zvinyorwa, iyo Izvo hazvichabatanidzwe neApple ID yako uye hazvioneke muchikamu "Chakatengwa" kubva kuMac App Store. Asi izvi zvinorevei chaizvo?
MacOS Yakakwira Sierra inonyangarika kubva pakutenga kwako
Kutevera kuburitswa kweMacOS High Sierra, zvakaonekwa kuti kambani Apple haisisiri kunyora zvinyorwa yeiyo yekutanga sisitimu yekushandisa, macOS Sierra, kana iyo yazvino yekuvandudza kune macOS High Sierra, mune iyo "Yakatengwa" tebhu yeMac App Store.
Chokwadi, kana iwe ukatarisa chikamu ichi, iwe unozogona kuona kuti macOS Sierra kana macOS High Sierra haioneke sei mune yekutenga zvinyorwa, izvo zvinoratidza kuti mitsva haisati yasungirirwa kuApple ID kutsunga.
Kusvika parizvino, zvese zvakapfuura kugadziridzwa kweMac inoshanda sisitimu zvakabatanidzwa neApple ID, yemunhu akaigadzira, uye iyo yekuvandudza inoda ID yeApple uye kuunzwa kwepassword, chimwe chinhu chingave chinetso kana Mac achinja muridzi, chero bedzi isina kuendeswa nekubvisa zero.
Zvisinei, a Apple gwaro rekutsigira Nezve kudzoreredza kunyorera kunosimbisa izvo the change kubvisa macOS Sierra uye High Sierra kubva kune Yakatengwa tebhu zvaive nemaune chose: "MacOS Sierra kana gare gare haioneke muTenga rakatengwa", vanonongedza kubva kuMacRumors.
Panyaya ye macOS Sierra, shanduko inoreva izvozvo hapana nzira yepamutemo yevashandisi yekudhawunirodha nekuisa macOS Sierra kana vachida kurodha pasi kubva kuHigh Sierra. Kunyange pane nzira nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » macOS High Sierra haichabatanidzwe neApple ID yako
Kuwanikwa kweAirPods kwakaderedzwa kusvika pamazuva 3-5
Goverana yako iCloud yekuchengetedza nenhengo dzemhuri paMacOS High Sierra